Trafikan’olombelona :: Zaza, 4 taona, votsotra teo am-pelantanan’ilay lehilahy nokaramaina iray tapitrisa ariary • AoRaha
Ankizivavy kely iray, efatra taona, indray no lasibatr’ireo mpanao trafikan’olombelona tany Ambokala-Manakara, tamin’ny 18 aogositra lasa teo. Nalain’ny lehilahy iray an-keriny tao an-tranony io ankizy io. Niditra an-tsehatra ireo fokonolona nanenjika ny mpangalatra. Saika niharan’ny fitsaram-bahoaka ilay lehilahy, raha tsy tonga haingana ireo zandary avy any Ampasimanjeva. Naiditra am-ponja vonjimaika ao Manakara izy, afak’omaly, rehefa avy natolotra ny Fitsarana.
Haingana ny fahatongavan’ireo zandary tany amin’io toerana nitrangan’ity fakàna an-keriny ankizy ity. “Rehefa nanontaniana ilay mpaka an-keriny dia nilaza fa nisy naniraka izy haka an’io zazavavy io. Nomen’ilay mpaniraka vola iray tapitrisa ariary izy. Tsy fantatra anefa izay nokasaina hanaovana an’ity ankizivavy raha sanatria ka tsy sarona ny teti-dratsiny. Tezitra mafy ireo andian’olona rehefa naheno izany ka saika hamono azy ho faty. Voaaron’ireo zandary anefa izy”, hoy ny fitantaran’ny loharanom-baovao avy any an-toerana.
Voasambotry ny zandary ihany koa ny lehilahy iray hafa voalaza fa naniraka sy nanome vola an’iry mpaka an-keriny, andro vitsy taorian’izay. Samy natolotra ny Fitsarana izy roa lahy. Nahazo fahafahana vonjimaika ilay voalaza ho naniraka. Naiditra am-ponja kosa ny lehilahy voasambotra tamin’ny fakàna an’ilay zaza.
Roa andro taorian’io, tamin’ny 20 aogositra no nisy tranga trafikan’olombelona ihany koa tra-tehaky ny zandary tany Antsirabe. Lehilahy iray, 18 taona, no namidy efatra tapitrisa ariary. Soa fa nisy ny tsara sitrapo nanome vaovao an’ireo mpitandro filaminana tamin’izany tranga izany satria tany Betafo no nakàna an’itsy tovolahy, saingy tany Antsirabe izy vao hita. Samy avotra soa aman-tsara tsy nisy naratra na io tovolahy io na ilay ankizy efatra taona, tany Manakara.
Mamerina ny ahiahy samihafa nalaza teto amintsika tao anatin’ny taona vitsy lasa izao, ireo tranga roa ireo. Mety misy tokoa ny varotra olona eto Madagasikara. Tsaroana ny savorovoro ara-tsaina nihatra tamin’ny ray aman-dreny maro teto an-drenivohitra nandritra ny resabe niely momba ny fahaverezana ankizy.
Fanenjehana mpanao ratsy :: Jiolahy roa maty voatifitra, polisy roa naratra
Zava-mahadomelina :: Ankizy roa tratra nitondra rongony